GadaaTube: A Lesson From An Oromian « GadaaTube
A Lesson From An Oromian
See More Videos	TVORO - MAGAALA OSLOO IRRA: Gammee...
Part One: Oromos & Ogadenis Protest...
Elemo Ali - Qeerroo
Did DFID properly investigate Ethiopian...
A Lesson From An Oromian – Source: YouTube.com/user/Oromobiyya
Title: A Lesson From An Oromian
Tags/Credits: Macha-Tulama Self-Help Association, Oromo Struggle	More Videos
Prof. Asafa Jalata Discusses...
Oromos, Somalis & Others...
July 4, 2012 @ 11:11 am
Dhugaa keessani!! Waaqayyo tokkichi umrii keessan nuuf haadheeressu! Dargaggoon oromo dubbi nama kanaa qalbeeffatanii dhageefachuu qabdu.
July 25, 2012 @ 5:54 am
Obbo Fayyisaa Yaadasa Gaaxexxeessa, Barreessaa tiyaatiraa fi nam-guddaa ummanno oromoo qabu ture. Bara 2003 tiyaatira isaa Lukluksaa mana barnoota itti baradhutti fidee dhiyessee daawwachuuf carraa argadheen ture. Waan baayee nama barsiisa. Ergaan inni asitti dargaggootaf dhaamee kun amallee dhaloota dhalootatti darba. Innis darbu, seenan bara baraan ni yaadata. Biyyoo isattii haa salphattu!